Kuvuselelwe Ukunethezeka Kwesimanje kwe-APT Kumpahla Engokomlando - I-Airbnb
Kuvuselelwe Ukunethezeka Kwesimanje kwe-APT Kumpahla Engokomlando
Leli yindlu yokulala ethokomele engu-1 esakhiweni esinomlando se-Red Wing esakhiwe ngo-1890. Leli fulethi selilungiswe kabusha laba ubuntofontofo besimanje ngenkathi ligcina ubuhle beminyaka eyi-100 edlule. Itholakala kuphela imayela elingu-1 ukusuka edolobheni iRed Wing enikeza ukufinyelela okulula ezindleleni zokuqwala izintaba/izintaba, uMfula iMississippi, iWelch Village namapaki amaningi nezinto ezihehayo zasendaweni. Leli fulethi likwenye yezindawo ezindala kakhulu eRed Wing ehlinzeka ngokubukwa okuhle kokuhamba ekuseni nakusihlwa.
Leli fulethi eliphezulu lisanda kulungiswa kabusha ngokuphelele. Isikhala sihlinzeka ngegumbi lokulala elingu-1, igumbi lokuhlala elithokomele eline-futon, indawo yokudlela yasekuseni, ikhishi eligcwele elinempahla eyisisekelo, kanye negumbi lokugezela langasese. Umatilasi womoya unikezwa ekhabetheni futhi amalineni engeziwe ayatholakala uma uwacela.
I-BBQ nendawo yokuhlala engaphandle ukuze isetshenziswe futhi itholakala kalula endaweni encane, ephethwe umndeni, ibhusha yasendaweni kanye negrosa okuqhelelene nje ukuze ubambe okuthile kokuphonswa ku-grill. Izitsha ze-BBQ namalahle kuyatholakala efulethini ukuze ukusebenzise.
Amamayela ayi-12 kuphela ukusuka e-Treasure Island Casino.
I-Netflix kanye nokuxhumeka kwe-wifi okuvikelwe okungu-100Mbs kuhlinzekiwe.
4.88 · 94 okushiwo abanye
Leli fulethi likwenye yezindawo ezindala kakhulu, "I-Old Fairgrounds", eRed Wing ehlinzeka ngokubukwa okuhle kokuhamba ekuseni nakusihlwa kanye nendlela yokubuka amakhaya amaningi amadala anakekelwa kahle endaweni.
Imayela elingu-1 kuphela ukusuka edolobheni iRed Wing elihlinzeka ngezitolo ezinkulu nezindawo zokudlela. Futhi kuphela amamayela ambalwa ukusuka ezindleleni eziningi ezinhle zokuhamba izintaba nokuhamba ngebhayisikili, izinkundla zegalofu ezinemigodi engu-18, kanye nokufinyelela eMfuleni iMississippi.
Ukungena nokuphuma ngaphandle kokuthinta okuvumela izivakashi ukuba zibe nezimo eziguquguqukayo eziphezulu.